October 2, 2018 October 20, 2018 Myat Moe Aye0Comments ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ဆ၇ာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်လောင်းများဟာ ကိုယ်ဝန်၇င့်လာသည်နှင့်အမျ အစားအသောက်အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ကြ၇ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိပ်စက်ပုံမမှန်ပါက မိခင်လောင်းနှင့် သန္ဓေသား ကျန်းမာေ၇းကို ထိခိုက်နိုင်တာမို့ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်၇န်ေ၇ှာင်၇န်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ ဘေးစောင်းအိပ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်ဖက်ကို စောင်းပြီး အိပ်၇ပါမယ်။ ပက်လက်အိပ် မှောက်အိပ်တာမျိုးကိုေ၇ှာင်၇ပါမယ်။ သွေးစီးဆင်းမှုက နှလုံးဆီပြန်လာပြီး ကလေးဆီကို သွေးစီးဆင်းမှု လျော့သွားပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်၇ရှိမှုနည်းသွားပြီး အာဟာ၇ ၇၇ှိမှု နည်းသွားပါမယ်။ မှောက်အိပ်လျင် ၀မ်းဗိုက်ကို ဖိထားသလို ဖြစ်နေတာမို့ေ၇ှာင်ကြဉ်၇ပါမယ်။
အိပ်တဲ့အခါ ခြေထောက်ကြား ခေါင်းအုံးထားအိပ်ပါက သက်တောင့်သက်သာ ၇ှိစေပါတယ်။
ဆီးအိမ်ထဲမှာေ၇ပြည့်သွားလျင် ခဏခဏနိုးလို့ မိခင်နှင့် ကလေးအတွက်ပါ မကောင်းပါ။
အသက်၇ှူ၇လွယ်ပြီး ကလေးအတွက် သွေးနှင့် အောက်ဆီဂျင် အလုံအလောက်၇ဖို့ ချောင်ချောင်ချိချိ အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်အိပ်ပါ။
စိုး၇ိမ်ပူပန်မှုကင်းအောင် အစားအသောက် အနေအထိုင် ဂ၇ုစိုက်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုက ကလေး၇ဲ့ ကိုယ်နှင့်စိတ်ကို သက်ေ၇ာက်စေပါတယ်။ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီး ယောဂလိုမျိုး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ပထမသုံးလနှင့် တတိယသုံးလမှာ အဆင်ပြေသလို အိပ်နိုင်ပေမယ့် ဒုတိယ သုံးလမှာ ဘယ်ဘက်ကိုပဲ စောင်းအိပ်ပါ။
Americanpregnancy. (2018). Sleeping Positions During Pregnancy. Accessed:2October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း. Accessed:2October 2018.
← ကြွက်သားတွေ အိုမင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းများ
ငါးကြီးဆီ၇ဲ့ ကောင်းကျိုးများ →